Talooyin iyo Tusaalooyin Archives - Fox Articles
Home/Talooyin iyo Tusaalooyin
Talooyin iyo Tusaalooyin
Haddii ay jirto in qof bini aadam ah baahi loo qabo nafteyda adiga ayey ku tebeysaa oo ay ku qanacsan tahay, iyadoo aanan ka fekereyn culeysyada imaan kara mustaqbalka, nafteyda ayaa kuu dhego nugul, dhegaheyga waxa ay maqlaan erayadaada oo keliya ,indhaheygana aragtidaada ayaa daawo u ah. Waa igu …
Hadii aad rabto in laogaado inaad tahay qof kalsooni isku qaba waxaad iska ilaalisaa inaad gacmahaga jeebka galiso midaan waxay kaadhigeysaa inaad tahay qof aanan isku kalsoneen oo waxaad umuuqaneysaa qof liitaa sidaa darteed iska ilaali calaamadas inaa sameeso. #fadlan share dheh
Daraasaddo dhawr ah oo xiriir ah oo ay sameeyeen xeel dheerayaasha arrimaha Jacaylku ayaa shaaciyay Astaamaha Gaarka u ah ee lagu garto qofka jacaylka dhabta ah uu hayo ama uu halleelo, taas oo aad ku garan karto haddii aad isku aragto astaamahan in Jacayl dhab ahi ku hayo. 1- Qofkada dhabta …
David 3 weeks ago	Talooyin iyo Tusaalooyin
Qofba wax buu ku wanaagsan yahay waxna waa looga fiican yahay. Nin baa deeqsi halka mid kalena uu naxariis badan yahay. Laakiin ragga leh shantan dabeecadood oo kaliya ayaa lagi sifeeyaa kuwa ay dumarku ugu jecel yihiin. 1- Taakuleyn Mid ka mid ah ragga ugu soo jiidashada badan ee ay …